Imaarada Islaamiga oo war kasoo saartay Weerar ay ku qaaday xarun ciidan oo ku taalla dalka Afqaanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Imaarada Islaamiga oo war kasoo saartay Weerar ay ku qaaday xarun ciidan oo ku taalla dalka Afqaanistaan.
On Apr 22, 2017 286 0
Ciidamo katirsan Istish-haadiyiinta Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan ayaa waaberigii maanta oo Sabti ah waxay weerar ku qaadeen saldhig weyn oo ku yaala wuqooyiga dalkaas, halkaas oo ay degnaayeen guuto katirsan ciidamada Xukuumadda Kaabul.
Weerarka oo ahaa mid si wanaagsan loo soo qorsheeyay ayaa waxaa fuliyay ugu yaraan Toban Mujaahid oo katirsan ciidamada Imaarada Islaamiga ah, kuwaas oo qaarkood xerada xoog ku galay, halka kuwa kalena ay horeyba ugu diyaarsanaayeen gudaha xerada la weeraray.
Saldhiga la weeraray wuxuu ku yaala gobolka Balakh ee wuqooyiga dalka Afqaanistaan, waxaana ku jiray ciidamo gaaraya 30 kun oo Askari, kuwaas oo halkaas deganaa, waxaana guutada la weeraray ay ahayd guutada 209-aad ee ciidamada Afqaanistaan.
War kasoo baxay Afhayeenka Imaarada Dabiixullahil Mujaahid wuxuu ku sheegay in Mujaahidiintu dagaal socoday 8 saacadood oo xiriir ah ay ku dileen kuna dhaawaceen 500 oo Askar iyo Saraakiil isugu jira.
Imaarada Islaamiga ah waxay sheegtay in weerarkan uu aargud ahaa labo sarkaal oo katirsanaa Mujaahidiinta, kuwaas oo lagu kala magacaabo Al-mullaa Cabdi salaam oo ahaa waaliga Qunduuz iyo waaligii wilaayada Baqlaan Muxamed Muxamadi kuwaas oo ku shahiiday duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dowladda Maraykanka.
Imaaradu waxya ku hanjbtay in weerarkan uu billow u yahay weeraro dhici doona inta lagu guda jira Guga, kuwaas oo ay sheegtay in xoogoodo ay ku beegsan doonto Ciidamada milliteriga iyo Booliiska xukuumadda Kaabul ee garabka siinaya kuwa Shisheeyaha.
Ugu dambeyn warka kasoo baxay Imaarada waxay baaq towbad keen ah ugu dirtay dhamaan ciidamada iyo saraakiisha xukuumadda Kaabul, kuwaas oo ay kula talisay iney ka hor wareegaan Mujaahidiinta oo doonaya in dalka Afqaanistaan ay ka saaraan gebi ahaanba ciidamada gumeystaha noocyadoda kala duwan ee dalkaas xooga ku jooga.
Waa weerarkii ugu xooganaa oo dhawaanahan ka dhaca dalka Afqaanistaan, waxaana weerarkan uu banaanka mar kale soo dhigay awoodda Imaarada ay u leedahay fulinta weeraro waaweyn iyo sida malleeshiyaadka Xukuumadda Kaabul ay gacan ku gambadka u yihiin.